Tantara - Xuzhou Roc International Trading Co., Ltd.
Ny taona voalohany
Niorina tamin'ny taona 1993 niaraka tamin'ny fampiasam-bola RMB 300,000, ny velarantanin'ny orinasa dia 5.000 metatra toradroa, ary ny isan'ny mpiasa dia 32 rotary fanapahana poplar veneer no vokatra lehibe indrindra. Ny vola isam-bolana dia manodidina ny 3.000.000 RMB
Ireo taona niforona
Tamin'ny 1997, Xuzhou Home World Wood Co., Ltd. dia niorina tamin'ny fampiasam-bola RMB8,000,000, manarona 33,000 metatra toradroa ary manana mpiasa 200 mahery. Amin'ity taona ity, ny fahaizan'ny famokarana ao anatin'izany ny plywood miatrika horonantsary, plywood varotra.
Ny taona fitomboana
Tamin'ny taona 2008, RMB 20.000.000 dia nanambola hanitatra ny orinasa ho 50, 000 metatra toradroa. Ary ny isan'ny mpiasa dia nitombo ho 500. Amin'ity indray mitoraka ity dia manolotra 10, 000 metatra toradroa isan-taona izahay plywood ary 30 000 metatra toratelo hafa. Ny fihodinana isan-taona dia tafakatra hatramin'ny RMB 160,000,000
Ny vanim-potoana fitomboana
Miaraka amin'ny fampiasam-bola 120 tapitrisa yuan dia natsangana ny vondrona World Home, izay mahatratra 133 000 metatra toradroa. Mamokatra horonantsary miatrika 250 000 metatra toradroa isan-taona izy, 23 000 metatra toratelo goavam-be, sary mihetsika 100 000 metatra toradroa miatrika plywood ary 5 000 metatra toratelo hafa. Ny sandan'ny vokatra isan-taona dia hatramin'ny RMB 4.000.000.000.
2011 - Androany
20 taona mahery ny fivelarana, ankehitriny ny senso dia manana zana-pananana sy orinasa mitazona azy mihoatra ny 9.
SUBSIDIARIES GROUP AO AN-TRANO
- ROC international trading Co., Ltd. - Orinasa manondrana & manafatra, Volavola sy fanaraha-maso ny gitara
- Zhengquan Wood Co., Ltd. - Mpanamboatra plywood fananganana
- Zhanpeng Timber Co., Ltd. - Mpanamboatra plywood fananganana
- Lifeng Timber Industry Co., Ltd. - Mpanamboatra gitara ara-barotra
- Tongshun Wood Co., Ltd. - Mpanamboatra plywood famonosana entana
- Zengyin Wood Co., Ltd. - Sambo fisakafoanana LVL, mpamokatra andry LVL
- FANS Furniture Co., Ltd. - Mpanamboatra fanaka